Barnaamijkaan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto xadiga sokorta ku jirta cabitaankaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Codsigan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku ekaato qiyaasta sonkorta cabitaankaaga ku jirta
Codsigan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto cabirka sonkorta ee cabitaankaaga
TELES RELAY 22 July 2019
Haddii sonkorta aysan u fiicneyn jirka, oo si xad dhaaf ah loo cuno, waxay yeelan kartaa cawaaqib xumo. Xaaladaha qaarkood, la socoshada sida saxda ah ee sonkorta loo cuno ayaa aad muhiim u ah.
Weligaa miyaad dooneysay inaad ogaato inta sonkorta ku jirtay cabitaanka aad hadda iibsatey? Waa suurtagal in laga wada tashado macluumaadka nafaqada, dabcan, wali waa lagama maarmaan in la ogaado sida loo garto. Way adag tahay in la sawiro tirada sonkorta haddii aadan haysan dheellitir la heli karo. Oo aan lahayn sonkorta in si toos ah miisaan loo yeesho, isku dheellitirku waxba tari maayo ...
Codsigan wuxuu u oggolaanayaa inuu ku sawiro sonkorta ku jirta cabbitaannadaada
Japan gudaheeda, nin la yiraahdo Daiki Shimizu wuxuu rabay inuu helo fikrad fiican oo ku saabsan xaddiga sonkorta ee cabitaankiisa. Wuxuu sameeyay codsi mobiil ah si loo arko sonkorta. Qalliinka waa mid fudud. Codsigu wuxuu iska baarayaa qaanuunka cabitaanka ee la sheegay inuu cabbo wuxuuna muujinayaa muuqaal muujinaya xaddiga sonkorta.
Maaha markii ugu horraysay ee nooceeda oo kale la dhasho. Tusaale ahaan MyFitnesspto, waxay kuu oggolaaneysaa wax isku mid ah. Waxay baaritaan ku sameyneysaa baro-kacayaasha cuntada waxayna muujineysaa macluumaadka nafaqada. Farqiga ugu weyn ee isticmaalka Daiki Shimizu waa sida loo isticmaalo macluumaadkan. Halkan, waa muuqaal iyo hadal badan, oo loo beddelay dhowr xabbadood oo sonkor ah.
Wali lama heli karo soo degsashada
Nasiib darrose, warka xun ayaa ah in barnaamijkan aan wali loo heli karin soo degsasho. Sida uu qabo Daiki Shimizu, horumarkiisa taariikhiisu sanad ka hor mashruucu wuu socday dhowr bilood. Markii uu wajahay baahida sii kordheysa ee adeegsadaha, ninkeennu wuxuu go'aansaday inuu sameeyo isbeddelada lagama maarmaanka u ah inuu u gudbiyo Apple App Store. Waxay hadda sugaysaa rukhsad.
Senator-ka Maraykanka ayaa doonaya inuu baaro FaceApp
1 downloads ee Microsoft Word for Android
Supercell (Brawl Stars) wuxuu noqonayaa macaamilka rasmiga ah ee Paris Saint-Germain
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/cette-application-vous-permet-de-visualiser-la-quantite-de-sucre-dans-votre-boisson-323014
Sonic the Hedgehog: Ben Schwartz wuxuu ku faraxsan yahay in taageerayaasha la dhagaystay
Daawashada smart ee Apple iyo Samsung waxay u egyihiin gebi ahaanba caajis ku dhawaad ​​naqshadda waalan ee cusub ee shirkadan